နေလင်းအောင်: ဆားပါသော ကော်ဖီ
Love begins withasmile, grow withakiss and ends withatear.
အချစ်ဆိုတာ အပြုံးနဲ့စတင်၊ မေတ္တာတွေ ပွားများပြီးနောက် မျက်ရည်နဲ့ အဆုံးသတ်ရတတ်တယ်။
သူမကို သူတွေ့ခဲ့တာကတော့ ပါတီပွဲတစ်ခုမှာပါ။ သူမဟာ အလွန်ထက်မြတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားအများစုဟာ သူမကို ပိုးပန်းခဲ့ကြတယ်။ သူကတော့ အညတရတစ်ယောက်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မည်သူကမှ သူ့ကို သတိမထားကြပါဘူး။ ပါတီပွဲပြီးတဲ့အခါ သူမကို ကော်ဖီလိုက်သောက်ဖို့ သူ ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ သူမ အံ့သြသွားပေမယ့် ယဉ်ကျေးပျူငှာသူ တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် ကော်ဖီလိုက်သောက်ဖို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူတို့နှစ်ဦး ထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ သူဟာ စကားတစ်ခွန်းမှ ပြောမထွက်နိုင်လောက်အောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်။ သူမလည်း စ်ိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် “ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်မကို အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုပါနော်”လို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောနေမိတယ်။ သူဟာ စားပွဲထိုးကို ရုတ်တရက် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်ကို ဆားနည်းနည်းပေးပါဗျာ။ ကော်ဖီထဲ ထည့်သောက်ချင်လို့ပါ”
လူတိုင်းဟာ သူ့ကို တအံ့တသြနဲ့ စိုက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ သူ့မျက်နှာ နီရဲသွားပေမယ့်လည်း ဆားတွေကို ကော်ဖီထဲထည့်ပြီး သောက်လိုက်တယ်။ သူမက သိလိုစိတ် ပြင်းပြစွာဖြင့် “ရှင့်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီအကျင့်မျိုး ရှိနေရတာလဲဟင်”လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ပင်လယ်အနီးမှာ နေခဲ့ရတယ်။ ပင်လယ်အနီး ကစားရတာကို ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ ပင်လယ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်ခဲ့သလို ဆားပါတဲ့ ကော်ဖီအရသာကိုလည်း ခံစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆားပါတဲ့ကော်ဖီကို သောက်တဲ့အချိန်တိုင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးဘဝ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတိမြို့အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတိမြို့ကို အရမ်းလွမ်းမိသလို အဲဒီမှာရှိနေသေးတဲ့ မိဘတွေကိုလည်း လွမ်းမိပါတယ်ဗျာ”
ဒီစကားတွေ ပြောနေစဉ် သူ့မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်လျှံနေခဲ့တယ်။ သူမ အလွန်အမင်း ခံစားသွားရပါတယ်။
ဒါဟာ သူ့နှလုံးသားထဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ တကယ့်ခံစားချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်လွမ်းနာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ လူတစ်ဦးဟာ အိမ်ကို ချစ်တတ်တဲ့သူ၊ အိမ်ကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ၊ အိမ်ကို တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် သူမကလည်း စတင်ပြီး ပြောဆိုပါတယ်။ အဝေးမှာရှိနေတဲ့ သူမဇာတိမြို့အကြောင်း၊ သူမရဲ့ ကလေးဘဝအကြောင်း၊ သူမ မိသားစုအကြောင်းတွေပေါ့။ ဒါဟာ အလွန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ စကားစမြည် ပြောဆိုမှုဖြစ်သလို လှပတဲ့ မေတ္တာဇာတ်လမ်းရဲ့ အစလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦး ဆက်လက်ပြီး တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သူဟာ သူမ လိုအပ်ချက်အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ သူဟာ သည်းခံတတ်တယ်။ ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသား၊ နွေးထွေးမှု၊ ဂရုစိုက်မှုလည်းရှိတယ်။ သူဟာ အဲဒီလို ကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ သူ့ကို လွှဲသွားတော့မလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဆားတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ကော်ဖီကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ အဲဒီနောက် သူမတို့ရဲ့မေတ္တာဇာတ်လမ်းဟာ လှပတဲ့ မေတ္တာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ မင်းသမီးလေးဟာ မင်းသားလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝမျိုးနေထိုင်ရသလိုပေါ့။
ဒီနောက်တော့ သူမဟာ သူ့အတွက် ကော်ဖီဖျော်ပေးတိုင်း ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပေးတယ်။ ဒါမျိုး သူနှစ်သက်ကြောင်းကို သူမသိနေလို့ပါ။
နှစ်ပေါင်းလေးဆယ် ကြာပြီးတဲ့အခါ သူသေဆုံးသွားတယ်။ သူမအတွက် စာလေးတစ်စောင် ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ စာထဲ ရေးထားတာကတော့…
တစ်ဘဝလုံး လိမ်ညာခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ဆားထည့်ထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုတာ မင်းကိုပြောခဲ့သမျှ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသော လိမ်ညာမှုပါ။ ကိုယ်တို့ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကို မှတ်မိသေးလား။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ်အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်လိုချင်တာက သကြားပါ။ ဒါပေမယ့် ဆားလို့ မှားပြောခဲ့မိတယ်။ ဒါကိုပြောင်းပြောဖို့ နှုတ်ဆွံ့နေခဲ့တဲ့အတွက် အမှားအတိုင်း ဆက်နင်းသွားခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်တို့နှစ်ဦးရဲ့ အစဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်မှတ်ခဲ့ပါဘူးကွာ။
အမှန်ကိုပြောပြဖို့ ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းကို ဘာမှ လိမ်ညာမပြောဖို့ ကတိပေးထားခဲ့ရတဲ့အတွက် အဲဒီလို ပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ ခုတော့ ကိုယ်သေရတော့မယ်။ ဘာမှ ကြောက်စရာ မရှိတော့တဲ့အတွက် မင်းကို အမှန်တရား ပြောပြရတာပါ။ တကယ်တော့ ဆားပါတဲ့ကော်ဖီကို ကိုယ် မနှစ်သက်ပါဘူးကွာ။ ဘယ်လောက်တောင် ထူးဆန်းဆိုးရွားလိုက်တဲ့ အရသာပါလိမ့်…
ဒါပေမဲ့… ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဆားပါတဲ့ကော်ဖီကိုပဲ သောက်ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်မင်းကို တွေ့ပြီးကတည်းက မင်းအတွက် ကိုယ်လုပ်ခဲ့သမျှ ဘာတစ်ခုမှ ဝမ်းမနည်းမိပါဘူးကွာ။ ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အပျော်ရွှင်ရဆုံးကတော့ ကိုယ်နဲ့အတူ မင်းရှိနေခဲ့ခြင်းပါ။ နောင်ဘဝဆိုတာမျိုးသာ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ် မင်းနဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်။ ဆားပါတဲ့ကော်ဖီကို ထပ်မံသောက်ရပါစေ…မင်းနဲ့ပဲ တစ်ဘဝလုံး လက်တွဲသွားချင်ပါတယ်”
စာရွက်တစ်ခုလုံး သူမမျက်ရည်တွေနဲ့ စိုရွဲသွားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့နေ့မှာ တစ်စုံတစ်ဦးက “ဆားပါတဲ့ကော်ဖီရဲ့ အရသာဟာ ဘယ်လိုနေလဲ”လို့ မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ “သိပ်ကောင်းတာပဲ”လို့ သူမ ဖြေလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
*Love is not2forget but2forgive.
*not2c but2understand.
*not2hear but2listen.
*not2let go but HOLD ON!!!
အချစ်ဆိုတာ… မေ့ပျောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ခွင့်လွှတ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။
အချစ်ဆိုတာ… သွားခွင့်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့သာဖြစ်တယ်။
Ref; The salty salt by Unknown
They sat inanice coffee shop, he was too nervous to say anything, she felt uncomfortable, she thought, please, let me go home… suddenly, he asked the waiter, "Would you please give me some salt? I’d like to put it in my coffee."
He replied, "When I wasalittle boy, I was living near the sea, I liked playing near the sea, I could feel the taste of the sea, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who are still living there."
That is his true feeling, from the bottom of his heart. A man who can tell out his homesickness, he must beaman who loves home, cares about home, has responsibility of home.
Then she also started to speak, spoke her faraway hometown, her childhood, her family. That wasareally nice talk, alsoabeautiful beginning of their story.
They continued to date. She found that actually he wasaman who meets all her demands; he has tolerance, was kind hearted, warm, careful. He was suchagood person but she almost missed him! Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story, the princess married to the prince, then they were living the happy life…
After 40 years, he passed away, left heraletter which said: “My dearest, please forgive me, forgive my whole life lie. This was the only lie I said to you…The Salty Coffee. Remember the first time we dated? I was so nervous at that time, actually I wanted some sugar, but I said salt. It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication!
I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I have promised not to lie to you for everything. Now, I’m dying, I afraid of nothing so I tell you the truth: I don’t like the salty coffee, whatastrange bad taste…
But I have had the salty coffee for my whole life! Since I knew you, I never feel sorry for anything I do for you. Having you with me is my biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again.”
Someday, someone asked her: what is the taste of salty coffee?
Posted by နေလင်းအောင် at 6:49 AM